Taageerada Daaweynta Jirka - Aloha United Way 2-1-1
Taageerada Daaweynta Jirka
By Carolyn Hyman | Maarso 7, 2022
Khadka caawinta ee AUW 211 waxa lagu heli karaa taleefoon, qoraal, iimaylka ama raadinta onlaynka ah. Markii "Lani" ay fariin u dirtay inay u baahan tahay caawimo ninkeeda, aad ayay ugu faraxday inay si fudud u hesho taageerada. "Ma garaneynin meel aan caawimaad ka raadsado sidaa darteed aad ayaan ugu faraxsanahay inaan helo hagida. Xogtu waxay i siisay jihada saxda ah.” Lani ninkeeda waa curyaan waxayna rabtay inay hesho agab loogu talagalay daawaynta jireed. Waxay ahayd markii ugu horaysay ee ay gaadho khadka caawinta ee AUW 211 waxaana taabtay xirfada iyo naxariista khabiirka caawiyay iyada. "Runtii waxay samaysay maalintayda. Meel aan wax ka bilaabo ma aqaanin,hadana waxa aan awood u yeelan doonaa in aan caawimo u helo ninkeyga. Way ku habboonayd, waxaanan ku dhiirri-gelin lahaa qof kasta oo su'aal qaba inuu soo waco,” ayuu la wadaagay qofka soo wacay.
Lani waxa loo gudbiyay PK Care LLC iyo Rehab ee Aiea. Dhammaan dadka soo wacaya, iyada oo aan loo eegin jasiiradda ay ka soo wacayaan, waxaa loo gudbin doonaa kheyraadka aaggooda waxaana takhasusleyaasha loo tababaray inay weydiiyaan su'aalo si ay u sameeyaan gudbinta ugu fiican ee suurtogalka ah.
Laga soo bilaabo raacitaanka baaskiilka ama kaalmada cashuurta ilaa daawaynta jidhka iyo kaalmada cuntada, AUW's 211 Khadka Caawinta Gobolka oo dhan waa la heli karaa marka aad ugu baahan tahay. In ka badan 4,000 oo agab ah ee la heli karo waxaa laga heli karaa onlayn iyo xogta xarunta wicitaanku waxay caawisaa hay'adaha aan faa'iido doonka ahayn iyo hay'adaha dawliga ah inay si hufan uga jawaabaan. Adeeggan waxa diyaar u ah deeq-bixiyeyaasha iyo taageereyaasha Aloha United Way. Khadka caawimadu maaha hay'ad dawladeed ama adeeg, laakiin waa la maalgeliyaa oo ay isticmaalaan dadka adiga oo kale ah. Si kastaba ha ahaatee waxaad u baahan tahay AUW's 211 Khadka Caawinta Gobolka oo dhan ayaa halkan u jooga inuu ku caawiyo.
Lagu dhejiyay 211 Answers